कोरोनाका बारेमा फेरी आयो नयाँ तथ्य, कानवाट पनि सर्छ कोरोना ! – Sanchar Patrika
कोरोनाका बारेमा फेरी आयो नयाँ तथ्य, कानवाट पनि सर्छ कोरोना !
काठमाडौं । को रोना विश्वव्यापी भएसंगै यसका अन्य पाटोका बारेमा पनि खोजी अनुसन्धान सुरु भएको छ । केही दिन अघि विश्व स्वास्थ्य संगठनले को रोना हावावाट पनि फैलन सक्ने भन्दै सचेत गराएको थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले हावामा पनि को रोनाका कि टाणु रहनसक्ने भन्दै वैज्ञानिकले गरेको अनुसन्धानलाई स्वीकार गरेका थियो ।
अहिले फेरी अनुसन्धानकर्ताले को रोनाका बारेमा नयाँ तथ्य पत्ता लगाएका छन् । को रोना मानिसको नाक, मुख र आँखावाट मात्र सर्ने भनिदै आएकोमा अब कानवाट पनि सर्न सक्ने अनुसन्धानवाट पत्ता लागेको छ । अमेरिकाका बैज्ञानिकहरुले गरेको अनुसन्धानमा को रोना भा इरसले मानिसको कान र मेस्टोयड हड्डीलाई पनि प्रभावित पार्न सक्ने नयाँ तथ्य फेला परेको जनाएका छन् । उनीहरुले यो तथ्यलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनमा प्रमाण सहित पेश गर्ने जनाएका छन् ।
को रोनावाट नि धन भएका ३ जनाको शरिरमा गरिएको परिक्षणवाट यस्तो तथ्य आएको उनीहरुको भनाई छ । सो क्रममा तीनै मृ’तकहरुको दुवै कान र पछाडिका भागमा पनि को रोनाका कि टाणु भएको पाइएको थियो । उनीहरुको निष्कर्षसँगै अमेरिकाका रिसर्चर जोन ह्ययापकिन्स स्कूल अफ मेडिसिन्सका शोधकर्ताहरुले को रोनाको ल क्षण देखिएका मानिसको कानको परीक्षण पनि हुनुपर्नेछ । कानबाट पनि शरीरका विभिन्न भागमा को रोना पुग्ने वैज्ञानिकको दावी छ । उनीहरुले एक युवती, र दुई बृद्धको श व लाई परीक्षण गरेकामा यो तथ्य फेला परेको हो ।
Prevयी लक्षण देखिए मृगौला खराब भएको हुनसक्छ
Nextविजय शाही वास्तविकता हेर्नुहोस्, मेमोरी किङ विजयको फर्मुला यस्तो, विश्वभर ब्यापक चर्चा ! (हेर्नुहोस भिडियो)
साम्राज्ञी अब मुद्दा लड्दै,भुवन फसे साम्राज्ञीको भुमरीमा (हेर्नुहोस भिडियो)